Ihe ndị dị na weebụsaịtị nwere ike ibugharị. Ma URL weebụsaịtị dị na Bekee nke a na-apụghị ịgụtagharị na asụsụ ndị ọzọ. Ngwá ọrụ asụsụ anyị na-enye ngwọta zuru ụwa ọnụ maka nke a.
URL nke weebụsaịtị dị na Bekee.
Ya mere, ndị na-abụghị Bekee, ndị ime obodo na mpaghara ndị mmadụ enweghị ike imepe saịtị weebụ. Ngwá ọrụ asụsụ anyị kacha mma maka ha. 1. Ndị na-asụ asụsụ mpaghara ga-enweta ibe weebụ site n'enyemaka nke onye ọ bụla mgbe naanị.